ဇူလိုင်လ 2018 | 40 ၏စာမျက်နှာ 110 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 40)
ရာထူး - အချိန်ပိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းကုမ္ပဏီ - Corey Advertising တည်နေရာ - Coral Gables FL US နောက်ထပ် >>
ရာထူး - Digital Media Mastermind (Internship) ကုမ္ပဏီ - Krietz အော်တိုအရောင်းတည်နေရာ - Frederick MD US အကယ်၍ သင်ဟာတီထွင်ဖန်တီးတတ်သူ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၊ ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေသူ၊ မောင်းနှင်သူ၊ , သင်သည်သင်၏ Krietz အော်တိုမီဒီယာအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေချင်! အဘယ်ကြောင့် Krietz အော်တို? ဖန်တီးမှုဝန်းကျင်၊ ဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးအစီအစဉ်များ၊
မြက်ချိုင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းနှင့်ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်သတ်မှတ်ထား EMEA နှင့်အမေရိကတိုက်ခေါင်းဆောင်မှုချိန်း
Montreal - ဇူလိုင်လ 23, 2018 - မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ်, EMEA နှင့်အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ဖောက်သည်အစေခံရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့က၎င်း၏နှစ်ရှည်လများရောင်းအားအမှုဆောင်အရာရှိနှစ်ခု၏မှတ်တမ်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပြုကြရန်တွန်းအားပေးနေသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအရောင်း, အမေရိကနှင့်က Tim ဘဏ်များများ၏အနေအထားမှဇန်နဝါရီ-Pieter ဗန် Welsem ခနျ့ထား ...
Presteigne ရက်ချိန်းနယူး CTO မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းပညာ Initiatives တွင်အာရုံစိုက်ရန်
Crawley အနောက် Sussex, 23 ဇူလိုင်လ 2018 - Presteigne အသံလွှင့်သည်ယနေ့ငှါးအကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိချုပ်အဖြစ်ကိုရှိမုနျ Atkinson ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ Presteigne CEO ဖြစ်သူ Mike ရွေးနုတ်ဖိုးကိုတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံ, Atkinson အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်အဖြစ်မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစပျိုးနှင့်စျေးကွက်အင်အားအကဲဖြတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပါအဝင်အားလုံးအင်ဂျင်နီယာလှုပ်ရှားမှုများကြီးကြပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Atkinson, ကင်မရာ Corps ကနေ Presteigne ရောက်ရှိ ...
aq အသံလွှင့် Grande Fratello များအတွက် Flexible နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေဗီဒီယိုဆာဗာဖြေရှင်းချက်ပေး
အဖြစ်မှန်တီဗီ format နဲ့ Big Brother ရဲ့အီတလီဗားရှင်းဖြစ်သော - - Grande Fratello ၏နောက်ဆုံးစီးရီး၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထုတ်လွှင့် Euroscena ကြိုတင်, နေ့စဉ်အကြောင်းအရာကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သိသိသာသာ volumes ကိုကမှတ်တမ်းတင်ဖို့အစွမ်းထက်သောဗီဒီယိုဆာဗာများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ မီလန်အတွက် Mediaset HQ မှလွှဲပြောင်းရန်။ ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် ...
ဝိပဿနာတီဗီကော်မရှင်ခံနိုငျရညျ: Spa ၏ 24 နာရီ, Worldwide မှမော်တော်ပြိုင်ပွဲပရိသတ်များများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံ
ဝိပဿနာတီဗီ, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် 4K UHD ရုပ်သံလိုင်း, ခံနိုငျရညျသစ်ကိုအရေးယူ-ထုပ်ပိုးပြပြန်တမ်းထားပါတယ်: ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံးခံနိုင်ရည်လူမျိုးတစ်ဦးမှာနောက်ကွယ်က-The-မြင်ကွင်းများတတ်ထားတဲ့ Spa ၏ 24 နာရီ "Spa စုစုပေါင်း 24 နာရီ" ။ ဒီနှစ်ဟာသူ့ရဲ့မှတ်တိုင် 70th ထုတ်ဝေခြေတစ်လှမ်းသောအဖြစ်အပျက်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်စနေနေ့ 28th ဇူလိုင်လအပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာနှင့် Blancpain GT ကို၏မီးမောင်းထိုးပြသည် ...
အသံအော်ပရေတာ (Project မှအရစ်ကျ)
ရာထူး - အသံအော်ပရေတာ (စီမံကိန်းငှားရမ်းခြင်း) ကုမ္ပဏီ - မီဒီယာကွန်ယက်များတည်နေရာ - နယူးယောက်နယူးယောက်၊ ယူအက်စ်၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ၊ တိုက်ရိုက်နှင့်တိပ်ခွေထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဒြပ်စင်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းပြင်ဆင်ပါ။ ထိန်းချုပ်မှုအခန်း Tech Manager နှင့်အတူမျိုးစုံ discrete ရောနှော - အနုတ် feeds တွေကိုညှိနှိုင်းနှင့်ပြင်ဆင်ပါ။ ဒြပ်စင်များဆုံးဖြတ်ရန်အယ်ဒီတာနှင့်ထိန်းချုပ်ခန်းမှ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှု ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့် Editor ကိုကုမ္ပဏီ: 730 Eddy Studios ကတည်နေရာ: Zeeland MI အမေရိကန်ဒီအနေအထားဗီဒီယိုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးကူညီကြောင်းအပြန်အလှန်မီဒီယာအတွက်အတွေ့အကြုံကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအေဂျင်စီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ စီမံကိန်းများအတော်ကြာမှကြိုတင်၏ရှုထောင့်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / Editor ကိုကုန်ကြမ်းရိုက်ကူး, ရုပ်ပုံများ, အသံကျော်, ဂီတ, နှင့်အထူးစုစည်း ...
40 ၏စာမျက်နှာ 110«ပထမဦးစွာ...102030«3839404142 » 506070...နောက်ဆုံး»